ကျွန်ုပ်တို့၏ DNS နှင့်ပြနာများ | Linux မှ
ကျွန်ုပ်တို့၏ DNS နှင့်ပြProbleနာများ
မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအဆင်မပြေမှုများအတွက်သင့်အားတောင်းပန်ချင်ပါသည်။ အခြေအနေကအောက်ပါဖြစ်ပါတယ်။ ငါပြောင်းလဲမှုအချို့လုပ်ခဲ့တယ် နာမည်ဆာဗာများ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိုမိန်းကိုဆိုလိုတာပါ DNS ကို backup အဖြစ်အလယ်တန်း။
အကြောင်းရင်းအချို့ကြောင့်ဇုန်များနှင့်မှတ်ပုံတင်စာရင်းများကိုမွမ်းမံနေစဉ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ဘလော့ဂ်ကိုတင်မည့်အစားကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိနေရာအနှံ့အပြားတွင်၊ GoDaddy။ ကြည့်ရသည်မှာတဖြည်းဖြည်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုများကိုပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့သော်လည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြင့်ပျက်စီးမှုကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုငါတို့မသိနိုင်တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပထမအမှားမှာအပြောင်းအလဲများပြုလုပ်တော့မည်ဟုအစီရင်ခံခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံမဖြစ်နိုင်ပါ
ကျေးဇူးပြု၍ တစ်စုံတစ်ယောက်မှပြproblemနာတစ်ခုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားaတုံ့ပြန်ချက် ဒီကိစ္စကို၏။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » ကျွန်ုပ်တို့၏ DNS နှင့်ပြProbleနာများ
36 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
မက္ကဆီကိုမှဘလော့ဂ်ကို ၀ င်ရန်ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemsနာမရှိပါ
ပထမ ဦး ဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်စကာ - မင်းကပြtheနာကိုပထမဆုံးအစီရင်ခံသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမင်းကယာယီဖြေရှင်းနည်းအတွက်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ငါ့ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ KZKGGaara ကိုဆက်သွယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကူညီခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Eduar2 မှာပြwithနာရှိနေသေးလားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရ ဦး မှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအဲဒီမှတ်ချက်ကိုတင်ပြီးကတည်းကနာရီအနည်းငယ်အကြာ ..
ဖိုရမ်များတွင်, ဤအချိန်, စပိန်အတွက်နံနက်သုံးခု, ငါမဝင်ရ။
FeedBack နှင့်ကြိုဆိုပါသည် Esmorga အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ခဏကြာတော့ troll volume ထဲကိုဓာတ်ပုံထည့်လိုက်တော့ပုံမှန်ဝင်လို့ရတယ်။ D, ပြforumနာကဖိုရမ်မှာပါ။
Moscosov ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ထာဝရကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
KZKG ^ Gaara <"Linux ကို ဟုသူကပြောသည်
+ 1 …။ ကျိန်းသေသင် gracias ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
KZKG ^ Gaara <"Linux သို့ပြန်ပြောပါ
ငါစာမျက်နှာနှင့်အတူမည်သည့်ပြproblemsနာရှိခဲ့ဖူးဘူး။ ငါပြIနာတွေအကြောင်းကိုရှာတွေ့လျှင်, သူတို့သည်သူတို့ကအကြောင်းရေးသားရေးသားချက်များမှဖြစ်ပါတယ်။
ယခုဘယ်လ်ဂျီယံမှသင်သည်ကဏ္ all အားလုံးကိုပြproblemsနာမရှိဘဲထည့်နိုင်သည်။
အခုငါဘလော့ဂ်၊ ဖိုရမ်များ၊ ငါးပိသို့မဟုတ် microblog ကွန်ယက်ကိုသာတွေ့နိုင်သည်။
မနေ့က Guadalajara Jalisco မက္ကဆီကိုကနေ၊ ငါဒီနေရာဒါမှမဟုတ်ဖိုရမ်ကိုဝင်လို့မရဘူး၊ မနေ့ညကငါဆိုဒ်နှစ်ခုလုံးကိုဝင်နိုင်တယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် you ခင်ဗျားပြောတဲ့ပြproblemနာမှန်လား။
ခဏတာအကြာငါအကူအညီနဲ့ပုံစံအတွက်အဖြေကိုပေးတော့မယ့်ခဲ့သည်, ထပ်မံ ado မရှိဘဲသူငါ့ကိုစာမျက်နှာကိုချွတ်ငါမဝင်ရ။
ငါသဘောတူတယ်၊ ပို့စ်ကိုဖတ်တယ်၊ ငါအကောင့်နဲ့စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်တော့မယ်၊ အဲ့ဒီကနေငါ့ကိုထုတ်ပစ်လိုက်တယ်၊ ခဏလောက်ငါရိုက်ထည့်နိုင်ခဲ့တယ်၊ Firefox သည်ဆာဗာကိုရှာမတွေ့သောအမှားကိုဖယ်ရှားသည်။
IE, Firefox နှင့် Chrome တို့လည်းအတူတူပဲ။
ငါထင်တာကတော့ DNS နှစ်ခုလုံးအကြားပaိပက္ခဖြစ်တယ်။ ငါဆုံးဖြတ်ချက်ချရတော့မယ်ထင်ပါတယ်
elav, ငါနောက်တစ်ခုတွေ့ပြီထင်တယ်၊ Ranking ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပြanotherနာကမင်းကိုနောက်ဘလော့ဂ်တစ်ခုဆီခေါ်ဆောင်သွားတာလား၊ အမှားလားဒါမှမဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်ထားတာလား။ အရင်ကအနေအထား Linux အဆင့်မှာပေါ်လာကတည်းကငါဒီအကြောင်းမှတ်ချက်ပေးတယ်။
ဒါကငါတို့အမှားမဟုတ်ပါဘူး။ RankingLinux သည်ရက်ပေါင်းများစွာကြာအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ငါဖိုရမ်သို့မဟုတ် microblog တစ်ခုခုကိုဝင်ရောက်လို့မရပါဘူး အကယ်၍ သင်နှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုကိုဖယ်ထုတ်လိုက်လျှင်၊ ဖိုရမ်သည်သံသယဝင်သူများအတွက် ပို၍ အသုံးဝင်သောကြောင့်မိုက်ခရိုဘလော့ဂ်ကိုငါဖယ်ထုတ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ microblog မကောင်းတဲ့ပေမယ့်။ ခက်ခဲဆုံးဖြတ်ချက်။
ငါ rogertux နှင့်အတူသဘောတူသည်ဖိုရမ်ပိုမိုအသုံးဝင်သည်။
မနေ့ကကတည်းကဖိုရမ်ကိုကျွန်တော်မ ၀ င်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အာဂျင်တီးနားမှာရှိနေတယ် !!
အဆိုပါငါးပိ hehe ဖြစ်စေအလုပ်မလုပ်ပါဘူး
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အလုပ်မှအိမ်ပြန်ရောက်ပြီး၊ ဤဖိုရမ်ကိုဤနေရာတွင်ဖတ်ရှု။ မရပါ။ ငါက ၄ ကီလိုမီတာအကွာလောက်မှာပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ node ကကွဲပြားခြားနားမလား၊ ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာငါမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီကနေငါ့ကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။
တစ်ယောက်ယောက်ကိုငါမကြိုက်ဘူးလားမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့် Firefox နဲ့လဲမလုံလောက်သလို Liferea နဲ့လဲ forum RSS နှင့်ချိတ်ဆက်မှုပျက်နေသည်။
သင်ကုန်သွယ်ရေး၏ gages ဖြစ်ကြောင်းနှုတ်ခွန်းဆက်သနှင့်အေးဆေး!
ပီရူးမှကောင်းသော (Forum, Paste, Blog လည်း DL.net) မှကောင်းသော
အခုကြည့်လိုက်တော့ဒါကတစ်ခုခုနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိမလားမသိဘူး။ ဒီမှတ်ချက်နှစ်ခုဟာဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၇း၀၀ နာရီမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားတာပါ။
ဘလော့တွင်ထွက်ပေါ်လာသည့်အရာသည်«ဒီဇင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၁ တွင် 9:2011 pm တွင်တင်ထားသည်
ဒီကနေဖိုရမ်နှင့် tt ငါ့ကိုမသွားဘူး။ ၀ င်ရန်ကြိုးစားသောအခါ“ server not found” ၏ပုံမှန်အမှားနှင့် dns တောင်းဆိုမှုများသည်မည်သည့် ip ကိုမျှပြန်မပေးပါ။
ကျနော်တို့ကသူကပြောတယ် GoDaddy နဲ့ပြseriousနာကြီးကြီးမားမားရှိတယ်။ တစ်ခုတည်းသောဖြေရှင်းနည်းမှာမနေ့ကအထိကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ hosting ကို DNS သို့ညွှန်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ဤအရာများ၏ဆိုးကျိုးမှာယခုအချိန်တွင် KZKGGaara ရောကျွန်ုပ်၌ပါပြောင်းလဲမှုများကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ရန်အင်တာနက်မရှိခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကကူညီလိုပါကဆက်သွယ်ရန်ပုံစံမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
Wireshark - သင်၏ကွန်ယက်အသွားအလာကိုစစ်ဆေးပါ